Maraykanka: Dadkii aan ku dilnay Bariire waxay ahaayeen Cadow. – Radio Alfurqaan | Xarunta Wararka Sugan
Maraykanka: Dadkii aan ku dilnay Bariire waxay ahaayeen Cadow.
On Nov 30, 2017 1,004 0
War rasmi ah oo kasoo baxay dowladda Maraykanka ayay si cad oo gambasho lahayn waxay ugu sheegtay in dadkii 25 Ogosto ee sanadkan lagu xasuuqay duleedka deegaanka Bariiri ahaayeen dad hubeysan oo cadow ah.
Warkan oo ay soo saareen guddi loo xilsaaray inuu baaritaan ku sameeyo arintaas oo katirsan taliska ciidamada Maraykanka ee Africa ayaa ugu dambeyn sheegay in dadka ay laayeen ciidamadooda ahaayeen cadow hubeysan.
Warka qoraalka ah ee kasoo baxay Maraykanka kuma tilmamin dadka uu laayay iney katirsanaayeen Xarakada Mujaahidiinta Al-Shabaab, sida markii uu howlgalku dhacay sheegeen, balse markan waxay leeyihiin oo kaliya waa cadow, taas oo muujineysa banaankana soo dhigaysa in Maraykanka uu cadow u arka guud ahaan shacabka soomaaliyeed.
“Kadib qiimeyn iyo baaritaano laga sameeyay howlgalo ay horkacayeen ciidamada Milatariga Soomaaliya iyo eedeymaha la xiriiray in dad rayid ah lagu diley,Taliska Gaarka ah ee Maraykanka u qaabilsan Howlgalada Africa (SOCAF) ayaa waxaa uu ku soo gunaanuday in dadka halkaa lagu diley ay ahaayeen cadow hubeysnaa” ayaa lagu yiri warka kasoo baxay Maraykanka.
Inkastoo warbaahinta noocyadooda kala duwan ay banaanka soo dhigeen iyagoo Ehellada dadka la dilay soo xiganaya in dadkaas ay ahaayeen shacab beeralay ah ayaa hadana mar kale waxay dowladda Maraykanka ku ciyaareysaa shucuurta dadka Muslimiinta ah.
Ugu yaraan 10 ruux oo caruur ay ku jireen ayay ciidamo Maraykan iyo kuwa soomaali ah dileen kadib markii ay ku weerareen beertooda oo ku taalla duleedka Bariire, waxaana markaas aad u kacdoomay shacabka soomaaliyeed.
Dowladda Farmaajo oo ka baqeysa kacdoonka markaas ay sameeyeen shacabka ayaa ugu dambeyn waxay shaacisay iney dhiibi doonto diyada dadka la dilay, waxaana la yaab leh in dowladdu ay sheegto iney diyo dhiibeyso, iyadoo ciidankii dadkaas laayay ay joogaan, ayna aaminsanyihiin in dadka ay laayeen ahaayeen cadow.
Xarakada Mujaahidiinta Al-Shabaab ayaa jawaab waafi ah oo banaanka taalla ka bixiyay gumaadkaas lagula kacay reer Bariire, waxaana duulaan lagu qaaday ciidamo ku sugnaa Bariire oo lagu dilay kudhowaad 100 Askari ay Mujaahidiintu ku sheegeen iney ugu aargudayeen dadkii Maraykanku laayay.
Halkan hoose ka akhriso bayaanka dowladda Maraykanka soo saartay.